Izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu ezinhle kakhulu. Isimo sezulu nesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngaphambi kokuba sibe nesikhathi esisele ezindabeni zokwazi isimo sezulu endaweni yangakithi. Namuhla, ngenxa yokuthuthuka kwezobuchwepheshe kanye nezokuxhumana, kunehlukile izicelo zesimo sezulu lokho kungasivumela ukuthi sazi imeteorology efonini yethu ephathekayo. Njengoba kunezimo ezehlukene zesimo sezulu, kufanele wazi ukuthi iyiphi oyikhethayo ngokuya ngokusetshenziswa esizokunika yona nokubaluleka kokunemba esifuna ukwazi ngakho isimo sezulu.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yiziphi izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu ezihamba phambili nokuthi yini uhlelo lokusebenza okudingeka lube luhle.
1 Yini edingekayo uhlelo lokusebenza lesimo sezulu
2 Izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu ezihamba phambili
2.2 Isimo sezulu
2.3 Isimo sezulu esingaphansi komhlaba
2.4 Isimo sezulu esibi
2.5 Izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu ezindala: i-weather bug
Yini edingekayo uhlelo lokusebenza lesimo sezulu
Ngaphambi kokuthi sisho ukuthi isimo sezulu esisodwa singcono kunesinye, kufanele sibone izici esizidingayo ngaleso sikhathi. Kunamathuba angenamkhawulo kepha into esemqoka efunwa kuhlelo lokusebenza ukuthi kulula ukuyisebenzisa futhi ayinakho ukukhangisa okuhlaselayo okuningi. Uma sifaka lolu hlobo lohlelo lokusebenza kwiselula yethu sibheka kalula ukwazi isimo sezulu. Ake sibone ukuthi yiziphi izici lolu hlobo lohlelo lokusebenza oludinga ukufunwa kakhulu:
Izinga lokushisa nomoya: mhlawumbe ukuguquguquka kwesimo sezulu okuseshwe kakhulu. Izinga lokushisa nokuzwa okushisayo kwendawo esizoya kuyo kubalulekile ukwazi uhlobo lwezingubo esizodinga. Isibonelo, uma sizohambela ngaphandle kwedolobha lethu noma idolobha sizodinga ukwazi izinga lokushisa nemizwa yokushisa lapho siya khona.
Isibikezelo sehora: kwesinye isikhathi isibikezelo sezulu siyinkimbinkimbi ngokwengeziwe futhi siyiphutha. Ngakho-ke, ukwazi isibikezelo ngamahora kunembe kakhudlwana. Akubalulekile kuphela ukwazi usuku izulu elizoba ngalo kepha nesikhathi esizokwenza ngalo.
Izexwayiso: Uma isimo sezulu sishintsha kakhulu, ukubikezela kungashintshwa futhi sithola isexwayiso sesikhathi sangempela mayelana nezinguquko ezingalungiswa.
Indawo: Isicelo sidinga futhi ukwazi ukusithola futhi sinikeze isibikezelo sezulu sendawo esikuyo. Kubalulekile ukuthi uhlelo lokusebenza kumele lube ngesathelayithi indawo yethu futhi akudingeki ukuthi singene ngesandla lapho sikhona.
Ukuphuma nokushona kwelanga: ukuphuma nokushona kwelanga yizinto ezimbili ezithandekayo zansuku zonke okufanele zenziwe. Ngokuya ngalezi zingxenye ezimbili zosuku, singazi ukuthi izinsuku zikhula noma zehla kanjani kuye ngesizini yonyaka. Ungahlela nokuphuma emini noma ebusuku ngaphandle kwezimanga.
Isimo sasolwandle: ikakhulukazi ngesikhathi sasehlobo kuyathakazelisa ukwazi izinga lokushisa kwamanzi, amagagasi, amahora omsinga omkhulu nophansi wokwenza imisebenzi yamanzi noma ukuya olwandle buthule.
Isimo somoya: isivinini esiya ngasemoyeni sibalulekile kunoma yiluphi uhlobo lomsebenzi ongaphandle esizowenza.
Izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu ezihamba phambili
Lolu hlelo lokusebenza ingenye edume kakhulu ku-Android naku-iOS. Inikeza imininingwane ku- isimo sezulu kuze kufike ezinsukwini eziyi-15 ngaphambi kwesikhathi. Kufanele wazi ukuthi ukunemba kwalolu lwazi kuba ngokungaqinisekile njengoba izinsuku ezintathu zidlula. Izinhlelo zasemkhathini azikwazi ukubikezelwa ngokunemba okukhulu kusuka kulesi sikhathi, ngoba izinto eziningi eziguquguqukayo zesimo sezulu ziyaguquguquka.
Uma sivula iwindi lohlelo lokusebenza singabona okuguquguqukayo okufana nomswakama, ukuphuma kwelanga nezikhathi zokushona kwelanga, ukubonakala, isivinini somoya nokuqondisa, ingcindezi yasemkhathini, izinga lokushisa nokuzwa okushisayo. Kusivumela nokuthi sazi okuguqukayo okukhulunywe ngakho kwamanye amadolobha sisebenzisa injini yokusesha. Ngale ndlela singazi ngaso sonke isikhathi ngezimo zendawo esizoya kuyo ukuze sinikezwe izambulela futhi sigweme ukuba manzi.
Ingesinye sezicelo zezulu ezihamba phambili lapho ungathola khona yonke imininingwane kugrafu eyodwa. Ngokushesha nje lapho ufaka isicelo ungabheka yonke imininingwane ye- izinga lokushisa eliphakeme nelincane, izinga lokushisa lamanje, isivinini somoya nokuqondisa, isimo sezulu, amathuba emvula, ukuphuma kwelanga nezikhathi zokushona kwelanga, njll. Okunye kokubi kwalolu hlelo lokusebenza ukuthi lonke ulwazi olutholakala esithombeni esisodwa lungaba nzima ukusibuka.
Noma kunjalo, uhlelo lokusebenza olunikeza isibikezelo sezulu ezingeni eliphakeme lemininingwane kunezinye izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu. Kodwa-ke, kunesibikezelo esididayo ngandlela thile ngoba inemiqondo ethe xaxa yobuchwepheshe engafinyelelwa kuyo kusukela kulwazi lwemozulu ejwayelekile.
Isimo sezulu esingaphansi komhlaba
Lolu hlelo lokusebenza lunikeza izibikezelo ezinembile nezendawo ngenxa yolwazi abasebenzisi ngokwabo abangakunikeza ngesikhathi sangempela. Futhi abantu abaningi abaneziteshi zezulu ezifakiwe emakhaya abo. Lolu hlelo lokusebenza lusebenza emhlabeni wonke. Kungenzeka ukuthi lolu hlelo lokusebenza alukukhiphi geolocate futhi kufanele ufake igama ledolobha ngesandla. Ukuba uhlelo olungagxili emakethe yaseSpain, kunjalo Ungahle uhlangane nezinkinga ezithile ngamayunithi wesilinganiso. Kumele ziguqulwe ngokwenza kusuka kuzilungiselelo.
Inzuzo ukuthi iphaneli lenziwa ngezifiso ngokuphelele futhi ungangeza futhi ususe imininingwane ngokuya ngentshisekelo yakho.
Isimo sezulu esibi
Lolu hlelo lokusebenza luhlukile, ngoba lusikhombisa isimo sezulu ngaso sonke isikhathi imidwebo yezilwane zasendle, kuya ngesikhathi sosuku esihlangana ngaso. Uma ngokwesibonelo kusebusuku futhi kunamafu, kusikhombisa inyamazane edla utshani ethafeni futhi ngemuva amafu athile adlula phezu kwayo.
Ngaphezu kwalokho, kusazisa ngesimo sezulu sezulu ezinsukwini ezizayo, izinga lokushisa namathuba emvula nejubane lomoya.
Izinhlelo zokusebenza zesimo sezulu ezindala: i-weather bug
Ingenye yezicelo ezindala kakhulu zesikhathi futhi enye yezinto ezaziwa kakhulu ngokuba nobuhle obuhle kakhulu. Yonke imininingwane ingenziwa ngamathebhu futhi ungakwazi hlola isimo sezulu samanje nesimo sezulu ngamahora nezinsuku. Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka yi-protagonist yize ingahluka kuye ngesimo sezulu. Isibonelo, uma lina, lizobonakala limnyama ngombala futhi kufakwe namaconsi emvula.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nezicelo zezulu ezihamba phambili.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinsimbi Zomkhathi » Izicelo zezulu
IGulf of alaska